I-11 Izithako eziBalulekileyo kwiBhlog yePost Post | Martech Zone
Eminye yemixholo ebalaseleyo oza kuyifumana kwiwebhu yenzeka xa ukwazi ukuthatha inkqubo enobunzima kwaye uyenze lula. I-Copyblogger ikwenzile oko nge le infographic ekubhaleni iiposti zebhlog. Yonke imiba yengcebiso kukucokisa kunye nokupolisha iposti ukuze ufumane kwaye ugcine abafundi. Kukho izitshixo ngaphambi & emva, nako…
phambi kokuba -Bhala ibhlog yakho kwifayile ye- iqonga elilungiselelwe kakuhle oko kuyathandeka, kukhuthaza ukwabelana, kwaye kubonelela ngokubiza abafundi ukuba bathathe inxaxheba ngakumbi (ukubhaliswa, ukhuphelo, ubulungu, njl.njl.).
emva -Khuthaza iposti yakho yebhlog kuyo yonke indawo yokunxibelelana nabantu ukuze ufumane abafundi abaninzi kwaye uyifake kwintengiso yakho ye-imeyile ukugcina ezo ndwendwe zibuya!
Ukuba ungathanda ukufunda amanqaku e-Copyblogger kwisithako ngasinye se-11, nantsi apho uya khona:
Ubugcisa a isihloko semagneti.
ukusebenzisa amagama acengayo.
Bhala izivakalisi ezilungileyo.
Faka umbulali Indawo yembumbhuli.
dala iintloko ezincinci.
Xelela ukukhohlisa ibali.
Gcina ingqalelo kunye Iingcango zangaphakathi.
Khetha u- ukubamba umfanekiso.
tags: ukuthembekangeposi blogIndawo yembumbhuliikopi yeebloggersihlokoubhala njani iposti yebhlogUkusetyenziswa komfanekisouluhlu lwezintoizintluikopi ecengayoisihloko seposiUkubhalwa kwamabaliizihlokwana
NgoJanuwari 7, 2014 ngo-10:57 PM
Enkosi ngokushwankathela emazantsi eposi. I-infographic inzima kancinci ukuyifunda